पुस्तकचिनो प्रविष्टिहरूका लागि ढाँचा निश्चित गर्नुहोस्.
सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बिब्लियोग्राफी तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (जब बिब्लियोग्राफी चयन गरिएको प्रकार हो) छान्नुहोस्
प्रदर्शन गरिएका प्रकारहरू भिन्न साहित्य स्रोतहरूमा निर्भर गर्दछन।
उपलब्ध बाइबिलोग्राफी प्रविष्टिहरू सूचीबद्ध गर्दछ। संरचना लाइनमा प्रविष्टि थप्नको लागि प्रविष्टिमा क्लिक गर्नुहोस्, खाली ढाँचामा संरचना रेखामा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस्इन्सेर्त्. प्रयोग गर्नुहोस् बाइबिलोग्राफी प्रविष्टि को परिभाषित गर्नुहोस्संवादहरू नयाँ प्रविष्टिहरू थप्नका लागि।
संरचना रेखामा चयन गरिएको बाइबिलिवृत्ति प्रविष्टिको लागि सन्दर्भ कोड थप्दछ। सूचीमा प्रविष्टि चयन गर्नुहोस्, खाली बक्समा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
संरचना रेखाबाट चयन गरिएको सन्दर्भ कोड हटाउनुहोस्।
पुस्तकसूची प्रविष्टिका लागि क्रमबद्व विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.
तपाईंले निर्दिष्ट गर्नुभएको क्रमबद्ध कुञ्जीहरू द्वारा बाइबिलोग्राफी प्रविष्टिहरू बदल्दछ, उदाहरणका लागि लेखकले वा प्रकाशनको वर्ष।
१, २ वा ३
ग्रन्थ सूची प्रविष्टी अल्फा न्यूमेरिकल क्रममा क्रमबद्ध गर्दछ।
ले घट्दो अल्फा न्यूमेरिकल क्रम मा बिलिओग्राफि प्रविष्टिहरू लाई क्रमबद्ध गर्दछ ।
Title is: प्रविष्टि (पुस्तकचिनो)